နီပေါနိုင်ငံသို့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ ထပ်မံထောက်ပံ့သွားမည်ဟု တရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး ပြောကြား - Xinhua News Agency
နီပေါနိုင်ငံသို့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ ထပ်မံထောက်ပံ့သွားမည်ဟု တရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး ပြောကြား
ပို့ကုန်အမယ် ၃၄ ခုနှင့် သွင်းကုန်အမယ် ၇၂ခု ကို ၃ လ ယာယီဖြေလျှော့ပေး
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၌ ဝင်ရောက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးစဉ် တိုက်ပေါ်မှ လူငယ်၅ဦးခုန်ချရာ၂ဦးသေဆုံး၊ ၃ ဦး ဒဏ်ရာရဟု နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ သတင်းထုတ်ပြန်
မြန်မာနိုင်ငံတော် အိမ်စောင့်အစိုးရအဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း၊ အိမ်စောင့်အစိုးရ၏ ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဆောင်ရွက်မည်
ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ၂၀၂၃ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် ပြီးစီးနိုင်ဖွယ်ရှိဟု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ဆို
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ ဥက္ကဋ္ဌတို့တွေ့ဆုံ
တရုတ်နိုင်ငံတွင် လူပေါင်း တစ်သန်းကျော်ရှိသည့် မြို့များ၏ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကို မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်း လွှမ်းခြုံထားနိုင်ပြီဖြစ်
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကြား ကုန်းတွင်း-ပင်လယ် ကုန်သွယ်ရေးင်္ကြံချိတ်ဆက်
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်က (၇၆)ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံသို့ တက်ရောက်၍ အရေးကြီးမိန့်ခွန်းပြောကြား
တရုတ်နိုင်ငံက ကာကွယ်ဆေးများ ၊ နိုင်ငံတကာအကူအညီများ ပို၍ထောက်ပံ့မည်
ယူနန်ပြည်နယ်တွင် ဇန်နဝါရီလမှ ဩဂုတ်လအတွင်း နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှု မြင့်တက်
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် RCEP အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများက ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်အား လျာထားသည့်အတိုင်း အကောင်အထည်ဖော်ရေး လုပ်ဆောင်လျက်ရှိ
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကြား ကုန်တင်အဝေးပြေးလမ်းဝန်ဆောင်မှုအသစ် ချိတ်ဆက်
ပေကျင်းမြို့တွင် 5G အခြေစိုက်စခန်း ၄၅,၀၀၀ ကျော်ရှိလာ
တရုတ်နိုင်ငံ ကွေ့ယန်မြို့ ၌ ခရီးသည်တင်သင်္ဘောတိမ်းမှောက်မှုဖြစ်ပွားတွင် သေဆုံးသူ ၉ ဦးထိ မြင့်တက်
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း စီချွမ်းပြည်နယ်တွင် ပြင်းအား ၆.၀ ရှိသော ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့် လူ ၂ ဦးသေဆုံး၊ ၃ ဦးဒဏ်ရာရ
ရှန်ဟိုင်းမြို့တွင် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း ရင်ဆိုင်နေရသဖြင့် လူပေါင်း ၃၃၀,၀၀၀ နီးပါးအား ဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရ
ဟူပေ၌ မိုးသက်လေပြင်းကြောင့် အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဆင့် တိုးမြှင့်ထား ၊ ဟဲနန်အတွက် လှူဒါန်းငွေ ယွမ် သန်း ၄၀၀ ရရှိထားဟု CRCF ပြော
တရုတ်နိုင်ငံ၌ လှည့်လည်သွားလာနေသော ဆင်များ ယူနန်ပြည်နယ်ရှိ မူလနေရာသို့ ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်
တရုတ်နိုင်ငံက ဘယ်သောအခါမျှ ဗိုလ်ကျစိုးမိုးမည် မဟုတ်ဟု ရှီကျင့်ဖိန်ပြောကြား
ရှီက ဒီမိုကရေစီသည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတည်းအတွက် အထူးသီးသန့် မူပိုင်ခွင့်မဟုတ်ဟု ပြောကြား
တရုတ်နိုင်ငံ ကုန်တင်အာကာသယာဉ်နှင့် အာကာသစခန်း ပင်မခန်း အောင်မြင်စွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့
တရုတ်နိုင်ငံ အာကာသစခန်း တည်ဆောက်ရေးအတွက် Tianzhou-3 ကုန်တင်အာကာသယာဉ်လွှတ်တင်မှု အပြည့်အဝ အောင်မြင်
တရုတ်နိုင်ငံက အာကာသစခန်းတည်ဆောက်ရေးအတွက် သုံးလကြာ လူလိုက်ပါသောမစ်ရှင်ပြီးဆုံး
Shenzhou-12 အာကာသယာဉ်မှူးများ ဘေးကင်းစွာဖြင့် မြေပြင်ပေါ်ဆင်းသက်နိုင်
တရုတ်နိုင်ငံက COVID-19 ရောဂါတွေ့ရှိခြင်းကြောင့် လေကြောင်းခရီးစဉ်နှစ်ခု ဆိုင်းငံ့
တရုတ်နိုင်ငံသည် Delta ဗီဇပြောင်း ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု ထိန်းချုပ်နိုင်မည့် ပထမဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း CNN က ဖော်ပြ
တရုတ်နိုင်ငံက ၈ နှစ်အတွင်း ကျေးလက်နေ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ ၉၉ သန်းနီးပါးအား ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှ လွတ်မြောက်အောင် ဆွဲတင်နိုင်ခဲ့ဟု စက္ကူဖြူစာတမ်းတွင် ဖော်ပြ
တရုတ်နိုင်ငံက အခြားနိုင်ငံများထက် ပိုမိုစိမ်းလန်းသောနိုင်ငံဖြစ်လာကြောင်း ဘီဘီစီပြော
ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့(SCO) “ ငြိမ်းချမ်းရေးမစ်ရှင် ၂၀၂၁” စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများ ရုရှားနိုင်ငံတွင် ကျင်းပ
တရုတ်နိုင်ငံ၏ စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းကာလ ရထားလမ်းတစ်လျှောက် လယ်ယာမြေအလှမြင်ကွင်းများအား တွေ့ရစဉ်
အထူးသတ်မှတ်ထားသည့် လူအုပ်စုများအား Pfize အားဖြည့် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ထပ်မံထိုးနှံရန် အမေရိကန် FDA ခွင့်ပြု
နီပေါနိုင်ငံက ပြည်ပခရီးသွားဧည့်သည်များအတွက် ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ ပြန်လည်ထုတ်ပေး
အစ္စရေးတွင်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း မရှိသည့်ဆရာများအား စာသင်ခွင့်ပိတ်ပင်
တရုတ်နိုင်ငံက ပစိဖိတ်ကျွန်းနိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နက်ရှိုင်းလျက်ရှိကြောင်း သမ္မတ ရှီပြော
ရုရှားနိုင်ငံအရှေ့ဖျားစွန်း၌ စစ်လေယာဉ် ပျက်ကျမှု ဖြစ်ပွားကာ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၆ ဦးလုံး သေဆုံး
ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး အားဖြည့်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံကောင်စစ်ဝန်ချုပ် ချန်းချန်က အင်တာဗျူးမေးမြန်းမှုများအား ပြန်လည်ဖြေကြား
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံက နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာဆက်ဆံလိုကြောင်း ယာယီ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပြော
ကုလသမဂ္ဂက အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်အတွက် အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေများ ချပေး
ဆူဒန်နိုင်ငံက မအောင်မြင်သော အာဏာသိမ်းမှု ခေါင်းဆောင်ကို ဖမ်းဆီး
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်းရှိ မျိုးနွယ်စုတရားရုံးတွင် သေနတ်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် လူ ၉ ဦးသေဆုံးပြီး ၂၀ ဦး ဒဏ်ရာရ
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ၌ ယောကျ်ားလေးများအတွက် အလယ်တန်း ၊ အထက်တန်း စာသင်ကျောင်းများ ပြန်ဖွင့်
ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ အုံလိုက်ကျင်းလိုက် ဝင်ရောက်လာမှုကြောင့် အမေရိကန်-မက္ကဆီကို နယ်စပ် တက္ကဆပ်ပြည်နယ် ပြည်ဝင်ဂိတ် ၆ ခုကို ပိတ်ထားရ
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ကရာချိမြို့၌ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းခြင်းကြောင့် လမ်းများ ရေကြီးရေလျှံကာ ယာဉ်အသွားအလာပိတ်ဆို့မှုများ ဖြစ်ပွား
အမျိုးသမီးများ ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ် ဝင်ရောက်ခွင့် ရွှေ့ဆိုင်းနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း အိန္ဒိယ ထိပ်တန်းတရားရုံး ပြောကြား
ထိုင်းနိုင်ငံက အဓိကခရီးသွားနေရာများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရေး နိုဝင်ဘာလအထိ နှောင့်နှေးဖွယ်ရှိ
၁၀၉ ကြိမ်မြောက် မဲခေါင်မြစ်အတွင်း ပူးတွဲကင်းလှည့်မှုစတင်
ကပ်ရောဂါကြောင့် စတော့ဟုမ်းမြို့တွင် ကျင်းပမည့် နိုဗယ်လ်ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနား ပယ်ဖျက်
ယူကရိန်းသမ္မတ၏ ထိပ်တန်းလက်ထောက် ပစ်မှတ်ထား လုပ်ကြံခံရသော်လည်း သေဘေးမှ လွတ်မြောက်
မက်ခရွန်နှင့် ဘိုင်ဒန်တို့ ရေငုပ်သင်္ဘောကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဥရောပတွင် အောက်တိုဘာလ၌ တွေ့ဆုံရန်ရှိ
Apple က iPad နှင့် iPad mini အသစ် မိတ်ဆက်
မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံ၌ အိမ်မွေးကြောင်များတွင် COVID-19 ရောဂါပိုး စစ်ဆေးတွေ့ရှိ
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် အသစ်တီထွင်သည့် တာဝေးပစ်ခရုစ်ဒုံးကျည် စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်မှု အောင်မြင်ဟု ဆို
ကုလသမဂ္ဂက ၎င်းတို့၏ ကွန်ပြူတာများ ဧပြီလတွင် ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်ခံရကြောင်း အတည်ပြု
ဟေတီနိုင်ငံတွင် ပြင်းအား ၇.၂ အဆင့်ရှိ ငလျင်လှုပ်ခတ် ၊ သေဆုံးသူ ၃၀၄ ဦးထိရှိလာ
ရေငုပ်သင်္ဘောကိစ္စ သဘောထားကွဲလွဲနေစဉ် ဘိုင်ဒန်က မက်ခရွန်နှင့် ဖုန်းပြောရန် ပန်ကြား
လက်ယာယိမ်းများ ဆန္ဒပြရန်ရှိသဖြင့် အမေရိကန် ကက်ပီတိုလွှတ်တော်အနီးတစ်ဝိုက်တွင် လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ထား
SpaceX က ပထမဆုံး အာကာသခရီးသွားမစ်ရှင် စတင်
မြောက်ကိုရီးယား၏ ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်မှုကို အမေရိကန်ရှုတ်ချ ၊ ဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်ရန်တောင်းဆို
မြန်မာ့ရွှေဈေး တစ်ကျပ်သား ၁,၈၅၀,၀၀၀ ကျပ်အထိ မြင့်တက်
မြန်မာ့ရွှေဈေး တစ်ကျပ်သားလျှင် ကျပ် ၁၇ သိန်း နီးပါးအထိ မြင့်တက်လာ
ပါလက်စတိုင်း-အစ္စရေး ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်အတွက် ဂျူး နှင့် အာရပ် အမျိုးသမီးများ ဂျေရုဆလမ်မြို့၌ ချီတက်ဆန္ဒပြ
ချမ်းသာသောနိုင်ငံများက COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ သိုလှောင်ခြင်းကို ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ သမ္မတ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်
ဂျပန်နိုင်ငံက ၂၀၂၂ ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် သက်ကြီးရွယ်အိုများအား COVID-19 ရောဂါ အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးများ စတင်ထိုးနှံပေးမည်
ဂျကာတာ-ဘန်ဒေါင်း မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းအတွက် ရထားသံလမ်း နောက်ဆုံးအသုတ် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ
နီပေါနိုင်ငံ ခတ္တမန္ဒူမြို့သို့ ဇွန် ၁ ရက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံထုတ်ကာကွယ်ဆေး အသုတ်တစ်သုတ် ရောက်ရှိလာစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ခတ္တမန္ဒူ ၊ ဇူလိုင် ၁၃ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ကပ်ရောဂါအား ရင်ဆိုင်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများကို နီပေါနိုင်ငံအား ထပ်မံကူညီပေးသွားမည်ဟု နီပေါနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး Hou Yanqi က ဇူလိုင် ၁၂ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။နီပေါနိုင်ငံသည် ယခုအခါ တရုတ်နိုင်ငံထုတ် ကာကွယ်ဆေး ၄ သန်း ဝယ်ယူထားကြောင်း ၊ တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် နီပေါနိုင်ငံသို့ ကာကွယ်ဆေးများကို လာမည့်ရက်များအတွင်း ထပ်မံပို့ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက နီပေါနိုင်ငံ၏ မြို့တော် ခတ္တမန္ဒူမြို့၌ ဗီဒီယိုလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
နီပေါနိုင်ငံ ခတ္တမန္ဒူမြို့ရှိ ဆေးရုံတစ်ရုံ၌ ဧပြီ ၇ ရက်က ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးက တရုတ်နိုင်ငံမှ လှူဒါန်းသော COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအား ပြသစဉ်(ဆင်ဟွာ)
“ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ နီပေါနိုင်ငံကို ကာကွယ်ဆေးတွေ ပိုပိုပြီး ဆက်လက်ထောက်ပံ့သွားပါမယ်”ဟု သံအမတ်ကြီးက ပြောကြားခဲ့သည်။ “နည်းပညာပိုင်းအရ ကျွန်တော် ကတိပေးနိုင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင် တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းက အခုဆိုရင် နေ့စဉ်နဲ့အမျှ တိုးတက်လာနေလို့ပါပဲ ”ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ကာကွယ်ဆေးများ ထောက်ပံ့မှု မလုံလောက်ခြင်းကြောင့် နီပေါနိုင်ငံသည် ဇူလိုင် ၁၁ ရက်အထိ နိုင်ငံသား သန်း ၃၀ အနက် လူဦးရေ ၂ ဒသမ ၆၁ သန်းကိုသာ ကာကွယ်ဆေး တစ်ကြိမ် ထိုးနှံပေးထားပြီး ကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ် ထိုးနှံထားသူမှာ ၁ ဒသမ ၀၄ သန်းရှိကြောင်း နီပေါနိုင်ငံ၏ ကျန်းမာရေး နှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနထံမှ သိရသည်။
နီပေါနိုင်ငံသည် ယခုအခါတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ဒုတိယလှိုင်းဖြင့် ကြုံတွေ့နေရပြီး အထူးသဖြင့် မေလတွင် လူနာသစ်ဦးရေသည် မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးစနစ်သည် ဝန်ပိနေကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် COVID-19 ကပ်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးတွင် နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအား တက်ကြွစွာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း နှင့် လက်လှမ်းမီခြင်းကို သေချာစေရန် ကတိကဝတ်ပြုထားကြောင်း တရုတ်သံအမတ်ကြီးက ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် တောင်အာရှနိုင်ငံအချို့သည် မကြာသေးမီက ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေး ၊ သမဝါယမဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာ နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ ချုံချင့် နှင့် ချန်ဒူးမြို့အသီးသီးတွင် အရေးပေါ်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ သိုလှောင်ရေးအတွက် စင်တာများတည်ဆောက်ရန် စတင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါလမ်းကြောင်းများသည် တောင်အာရှနိုင်ငံများ၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို အထောက်အကူပြုစေမည်ဖြစ်ပြီး ကပ်ရောဂါနှင့်အခြားအကျပ်အတည်းများ ကြုံတွေ့ရချိန်တွင် အရေးပေါ်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ ကူညီပို့ဆောင်ရန်အတွက် အလွန်လျှင်မြန်ပြီး ထိရောက်သောလမ်းကြောင်းများ ဖြစ်စေကြောင်း သံအမတ်ကြီးက ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ တိဘက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအား ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါမှ ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ချက်သည် နီပေါနိုင်ငံနှင့် နယ်စပ်ဂိတ်များ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာစေခဲ့ရသည့် အကြောင်းတရားဖြစ်သည်ဟု ၎င်းကဆိုသည်။ နှစ်နိုင်ငံ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် ယင်းကိစ္စအား တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းသွားရန် လည်း ၎င်းက အကောင်းမြင် ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
China to supply more COVID-19 vaccines to Nepal: Chinese ambassador
KATHMANDU, July 12 (Xinhua) — Chinese Ambassador to Nepal Hou Yanqi on Monday pledged more COVID-19 vaccine shots to Nepal to help vaccinate the South Asian country in its battle against the pandemic.
China will deliver more vaccine doses to Nepal “in the coming days” as Kathmandu is now purchasing4million shots of China-made vaccine, Hou said atapress conference held via video link in Kathmandu, the Nepali capital.
“We will continue to provide more and more vaccines to Nepal,” Hou added. “Technically I can promise that, because the capability and capacity of the production now is increasing day by day in China.”
Due toashort supply of vaccines, Nepal has managed to administer single dose to only 2.61 million of its 30 million nationals as of Sunday, while just 1.04 million people have been inoculated twice, according to the country’s Ministry of Health and Population.
Nepal is now gripped byasecond wave of the coronavirus, with its health system overwhelmed byaswelling number of new cases in May in particular.
The Chinese ambassador noted that China has actively carried out international cooperation in the fight against the COVID-19 pandemic, and is committed to ensuring accessibility and affordability of vaccines in developing countries.
China and some South Asian countries have lately launchedapoverty alleviation and cooperative development center andacenter for stockpile of emergency supplies in the Chinese cities of Chongqing and Chengdu respectively.
Hou said the platforms shall contribute to South Asian countries’ effort in poverty alleviation and help deliver emergency supplies in the face ofapandemic and other crises “inavery quick and efficient way.”
She stressed that the need to protect China’s Tibet Autonomous Region from the coronavirus is behind the delayed reopening of the transit points with Nepal. She expressed optimism that the concerned authorities of the two countries will resolve the issue as quickly as possible. Enditem
Photo 1 – A batch of Chinese vaccine arrives in Kathmandu, Nepal on June 1, 2021. (Xinhua/Sulav Shrestha)
Photo2– A health worker displaysaChina-donated COVID-19 vaccine dose atahospital in Kathmandu, Nepal, on April 7, 2021. (Xinhua/Sulav Shrestha)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ မြို့တော်နှင့် ပြည်နယ်များစွာ၌ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ပြတ်လပ်မှု